शुक्रबारको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ एमाले ? - Dainik Online Dainik Online
शुक्रबारको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ एमाले ?
प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७८, बिहिबार ९ : १६
काठमाडौं । भोलि (शुक्रबार) बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सहजै संचालन हुने संभावना देखिदैन । भोलि दिउसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको संसद बैठक पनि अवरोध गर्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ । एमालेको विरोधका कारण बुधबार तीनपटक सम्म संचालन हुन नसकेर सभामुखले बैठक भोलिका लागि बोलाएका छन् ।